[Kugadziriswa] Kana mafoni makuru akangozorora iyo yasara tech (2/3) - Jeune Afrique - Tamban RELAY
[Kugadziriswa] Kana mafoni makuru akangozorora iyo yasara tech (2/3) - Jeune Afrique
By TELES RELAY On Nyamavhuvhu 11, 2020
Kuburikidza neTelcar Cocoa, iyo American Cargill inotora hutungamiriri ...
[Tribune] MaNobel akamutsiridza sei kurwisa ...
Ivo chikamu chedanho redu reakakosha zana eAfrica hunhu hwa100: ivo vari vatambi vefoni, avo vakadzosera basa ravo nekufambisa mafungu ekuvandudza kwedhijitari pane kondinendi.
[Kuchinzvimbo] Vagumi vane simba kwazvo muAfrica muna 100
Asi vaenda kupi? Kwete kutsvaga gore rino revamiriri vewebhu hupfumi. Ivo vakatanga Jumia nevamwe vatungamiriri veAfrica veGoogle, Apple, Facebook, Amazon neMicrosoft (Gafam) vari kupa nzira gore rino kuindasitiri yerunhare iyo inokwanisa kufungidzira masevhisi uye kutora mukana unowanikwa wakapihwa nefoni mbozha nebhendi. achipfuura.
Vane simba muAfrican tech saka vanoramba vari vabati vemapoka makuru echinyakarekutaurirana mapoka. Pakati pavo, iconic Rob Shuter uyo anogara mwedzi yake yekupedzisira ari kumusoro kweiyo yakawanikwa MTN yaachasiya munaKurume 2021.
Yatsunga kuzvimisikidza seyakanyanya kupfuura yeAfrica yevashandi vejenareji vanoshanda pamakondinendi, boka racho rinoburitsa chombo charo chakavanzika: padhuze kuburikidza nemitauro yemunharaunda inopiwa pane chat chishandiso inovavarira kuve iyo chete yekupinda kumakumi emakumi emana masevhisi (mari yemafoni, kubhengi-inishuwarenzi, varaidzo, nezvimwewo).
Hassanein Hiridjee, mutsva
Pamwe chete Alioune Ndiaye (Orange Africa uye Middle East) achangobva kuburitsa Orange Bank mu Africa, kana Mike Adenuga, mukuru weNigerian Globacom mukutsvaga kuwedzera nyika dzese, Hassanein Hiridjee ari kujoina kirabhu yevanhu zana vane mukurumbira. kubva kondinendi. Ndinofanira kutaura izvozvo mukuru wea kusiyanisa wakasiyana Axian (mari, nhare, dzimba, simba) haina kumborega kutaurwa nezvazvo mumwedzi yapfuura.
Pamusoro pepesenti iyo inobata muFree muSenegal, iripowo muTogo mavakawana mukupera kwa2019 murairidzi wenhoroondo, Togocom, iyo yaanoda kushandura kuti ive sub-Saharan kuratidzwa kweboka rayo.
Nekuti iyo yakakosha muIndia Ocean umo inodzora iyo Telema oparesheni kuMadagascar neComoros, pamwe naTélécom Réunion-Mayotte, haadi kumira ipapo. Axian zvechokwadi akaisa chikumbiro chekuwanikwa kweiyo yepamhepo telecoms operator rezinesi kuEthiopiya.
Mukadzi mumwe chete ari muchikamu, Rebecca Enonchong
Jacobus Petrus, anozivikanwa sa “Koos” Bekker, anogoverana iwo mweya mumwechete uyu wokukunda. Kunyangwe iye zvino abvisirwa basa muchiitiko cheSouth Africa hofori Naspers, anoramba zvakadaro Mutungamiriri weboka rakasiyana. ayo anobatsira Prosus anokosheswa pamabhiriyoni zana emadhora paAmsterdam stock exchange.
Kubudirira kwakaitwa naNaspers kumurume uyu ane makore makumi matanhatu nemasere uyo muna 67 akarova humwe simba reChinese juggernaut yeInternet internet uye nharembozha nekuwana 2001% yezvikamu zvekambani yechidiki. Uku kufamba kwepoker kunobvumidza Naspers kuve nedanda remamirioni mazana matatu emadhora mumusangano weChina.
Mukadzi mumwe chete anoonekwa muchikamu ichi, Cameroonia Rebecca Enonchong, haatore simba rake kubva kune vezvemari vekushambadzira mari asi pachinzvimbo chake kubva munhau yekushambadzira pamwe nehukasha mukuda kushandurwa kwemadhijitari emabhizinesi madiki uye epakati pamakondinendi.
Nzwisisa nezve zviitiko SoftwareTech, kambani yake yakatangwa munharaunda dzinosvika makumi mana uye vachinyanya kugadzira bhizinesi manejimendi software yeVSEs uye maSME, makore makumi mashanu aya anoramba ari izwi rinokosha uye rinosimudzira vechidiki vazhinji vebhizimusi pamakondinendi. Zvakwana kuti ive nzvimbo munzvimbo yedu 2020.
Robert Shuter, mukuru weMTN (South Africa)
Rob Shuter, maneja weManagement weMTN kumusangano we 2019 South Africa Investment Conference 2019 © MTN Group / Twitter / 2019.
MunaKurume, Rob Shuter akafunga kuti anogona kurwisa zvakapusa gore rake rekupedzisira saboss weboka reSouth Africa MTN. Nekuda kwekuuya kwayo muna 2017 kubva kuVodafone, iyo inofambisa nyika inofambisa basa maererano nehuwandu hwevatengi yakagumisa kusawirirana kwayo nevatungamiriri veNigeria nekubhadhara faindi rekodhi yemadhora mazana mashanu emadhora, asi zvakare Yakavandudza purofiti yayo uye ikazivisa kududzira kwayo mabasa ayo epakati
Kugadziridzwa pamwe neyemari yemarezenji izvo hazvina kushamisa pachikamu chemurume uyo, mushure mekutanga basa rake rekutarisa kuDeloitte, akabva akabata zvinzvimbo zvepamusoro paStandard Bank neNedbank. Asi zvakange zvakanyorwa kuti ndima yeRob Shuter mukati meMTN, mutungamiri akangwara sezvazviri zvaibata, yaizotarisirwa nezviitiko zvinoshamisa.
Mukumuka kwenhamo yekoronavirus, uyu muridzi wechikomo akaita danho rekucheka mari yake yeboka ne20% gore rino. Izvo zvinochengetedza kugona kwayo kwekudyara muEthiopiya kana ikakwanisa kuwana rezinesi ipapo. Faira raasina chokwadi chekuona mhedzisiro zuva rekuenda kwake risati ratanga, rakarongerwa Kurume.
Rebecca Enonchong, muvambi weAppTech (Cameroon)
Cameroonia Rebecca Enonchong. © Patrick Nelle weJA
Zvakaita somunhu muzvinabhizimusi kuti Rebecca Enonchong, makumi mana nemashanu, akazviitira zita mune yepasirese yenyika yehunyanzvi hutsva. Asi iyo aura yemuvambi weAppToTech (mupi weanotungamira software) kubva ipapo ayambuka miganhu ye tech.
MuCameroon, uyu akaberekerwa kuNorthwest inotaura Chirungu zvakare ndeimwe yemanzwi ekurwisa kusarongeka kwenzanga. Muna 2017, akatakura kukurudzira kwe #BringBackOurInternet kureba, mushure mekunge hurumende yamisa mukana wekuwana internet munzvimbo dzinotaura Chirungu mumhirizhonga yedambudziko rezvematongerwo enyika.
Kubva ipapo, Rebecca Enonchong haazeze kushandisa vateereri vake vari kukura (vanopfuura vanyori zana nemakumi matanhatu vevanhu vanonyoresa paTwitter) kushora kusarongeka kuri munyika yake. ActiveSpaces, yekutanga-incubator iyo yakatangwa muCameroon, inoramba ichiwedzera network yayo. MunaChikunguru, kambani yechidiki yakavhura bazi idzva kumadokero kwenyika.
Hazanein Hiridjee, mukuru weboka reAxian (Madagascar)
Kana anga atove pakati pevane zana vane simba mu Africa muna 100, Hassanein Hiridjee, makumi mana nemasere, ari kufambira mberi nesimba gore rino nekuda kwenyaya dzakapfuma kwazvo. Boka remhuri Axian, iro raakakwanisa kubva muna 2019, akatanga nharembozha ye44G kuMadagascar mukupera kwaChikumi, achibatanidza chinzvimbo chayo semutungamiriri wenyika mukukurukurirana runhare.
Izvo zvinoshandawo mubato iri muSenegal neTogo, kubheta pamhiri penharaunda yevanoshanda nhare. Parizvino mubhangi, kugovera, real estate uye agribusiness, Axian iri kushandawo mubazi rezvemagetsi, iine mikuru mikuru yemagetsi muUganda neMali.
Pakupera kwa 2019, boka rakazarukira muAntananarivo NextA, yekutanga-incubator yakafuridzirwa neStudio F, muParis, naBillionire Xavier Niel.
Apollinaire Compaoré, sahwira weAplor Afrique boka (Burkina Faso)
Apollinaire Compaoré © Jacques Torregano yeJA
Kunyangwe paine chiitiko chinoshamisa 2020 nekuda kwedambudziko rehutano, mukuru ane simba weboka rePlanor Africa inosimbisazve danho rayo rekuenderera mberi nekudyara kwayo mari muma telecom uye kubhengi. Anodarika zviuru makumi mashanu neshanu zveCFA francs (mamirioni mazana masere emadhora), hafu yazvo ichaburitswa gore rino, ari kudiwa kuvandudza rezinesi re 55G reTelecel Faso, iri kugadzirira kuburitsa Telecel Money, basa rayo rekubhanga parunhare.
MuMalawi yakavakidzana, Apollinaire Compaoré anotarisira kuisa mari inosvika mabhiriyoni zana nemashanu eCFA francs kukudziridza Télécel Mali, yakasvika padanho revanonyoresa vane miriyoni imwe. Mari iyi ichashandiswawo kuvhura maviri emabhangi emabhangi. Iye ane makore makumi matanhatu ekuzvarwa, zvakare ari mukuru wevashandi veBurkinabè, ari kudzidza zvakare sarudzo yekutanga Wendkuni Bank International kunze kwemiganhu yenyika. Zvinoenderana neruzivo rwedu, Mali neCôte d'Ivoire zviri kunyanya pakuona kwayo.
Mike Adenuga, Mutungamiri weGlobacom (Nigeria)
Mike Adenuga, muvambi weGlobacom. © Jacques Witt / SIPA
Asinganetsi anopokana naAliko Dangote, Michael Adeniyi Agbolade Ishola Adenuga Jr mubirionari uye muNigeria, semukwikwidzi wake, uye akavaka hwakawanda hupfumi hwake mubazi remafuta, zvikuru nekambani yake yekuongorora Conoil. Panguva makumi matanhatu nenomwe, anotonga zvekare wechipiri wekuburitsa runhare rwekuNigeria, Globacom.
Mudzidzi wePace University muNew York, baba vevanomwe vaigara pakutanga kwezana 2020 iyo nzvimbo yechitatu munzvimbo yemabhirioni eAfrica, kuseri kwaAliko Dangote naNaguib Sawiris, ane mari inofungidzirwa kusvika pamabhiriyoni manomwe emadhora zvichienderana neForbes .
Alioune Ndiaye, Africa Director weOrange (Senegal)
Alioune Ndiaye, Mukuru weOrange Africa, muParis, muna 2018 © François Grivelet yeJA
MunaJanuary, Senegalese Alioune Ndiaye anodada kuvhura dzimbahwe reOrange nyowani (yaakakwanisa kubvira 2018), muCasablanca. Izvo zviri ikozvino kune uyo akapedza kudzidza we Institut Mines-Télécom Bhizinesi Chikoro uye Paris-Dauphine University, akareba ari mukuru weSenegalese anotsigira weboka raSonatel, kuzadzisa zvinangwa zvemari zvakamiswa neMutungamiriri wazvo, Stéphane Richard.
Pakazosvika 2025, Orange inotarisira kuzadzisa 20% yekushanduka kwayo muAfrica. Kuti izvi zviitike, Alioune Ndiaye anounza Orange Bank muCôte d'Ivoire pakupera kwegore, asati atarisa kune dzimwe nyika dze WAEMU.
Pamusoro pazvo, achaedza kuwana rezinesi kuEthiopiya, nyika ine vagari vanopfuura mamirioni - iyo yasarudza kuvhura chikamu chemafoni kukwikwidza - uye kupinda mumwe musika muhombe: South Africa, Nigeria kana, wadii, Algeria. Aya mapurojekiti anogona kupihwa mari kuburikidza neIPO yekambani inobata inounza pamwechete mabasa ese eAfrica mabasa.
Koos Bekker, CEO weNaspers (South Africa)
Akazvarwa muPotchefstroom muna 1952, Koos Bekker ndiye ari pamusoro pehupfumi hunofungidzirwa kusvika mabhiriyoni mazana maviri emadhora. Mushure mekutangisa basa rake mukushambadzira, iye nevamwe vadiki vashoma vekutanga M-Net, mumwe weaviri vakatanga kubhadhara terevhizheni kuSouth Africa.
Muna 1997, akazova CEO weboka reNasers media uye akaisa nzira yakatarwa yekubhadhara ipapo: haana kuwana muhoro, hapana bhonasi kana mabhenefiti, achigamuchira chete stock sarudzo. Mumakore gumi nemashanu, capitalization yeNaspers yakakura kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kusvika pamadhora zviuru makumi mana emadhora.
TELES RELAY 23423 Posts 1 mashoko
OL: Newcastle yakarota pamusoro paCavani, ivo vachava neTravel - FOOT 01
Cameroon: Paul Biya anotsigira danho rakakura mukati mevatongi - Jeune Afrique
Kuburikidza neTelcar Cocoa, iyo American Cargill inotora hutungamiriri hwekutengesa cocoa ...
[Tribune] MaNobels ari kugadzirisa sei kurwisa hurombo mu Africa -…
Mali: Shanduko yejunta, "sarudzo dzese dziri patafura"